Manao antso avo amin’ireo mpankafy azy mba hanome fanampiana hitsaboana ny fivontosana amin’ny atidohany ilay mpanakanto hip-hop Mozambikana Azagaia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2020 2:48 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Aogositra 2014)
Saripikan'i Rita da Silva navoaka tao amin'ny pejy Ajuda O Mano Azagaia (Ampio ny Rahalahy Azagaia) nahazoana alàlana. 10%-n'ny vola hitsaboana no voangona tamin'ny andro voalohany fanentanana.
Nanambara tao amin'ny kaontiny tambajotra sosialy ilay mpiangaly rap Mozambikana Edson da Luz, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Azagaia, fa voan'ny fivontosan'ny atidoha izy. Herinandro vitsivitsy lasa izay, nihetsika mafy ny androbeny ary nanomboka nahitana fihetsika hafahafa izy, toy ny fikorontanan-tsaina sy ny fahaverezan'ny fitadidiana. Ny fitiliana natao tany Mozambika sy Afrika atsimo no nanamafy fa misy fivontosana teo amin'ny ilany ankavanan'ny atidohany.
Mety ho faty ao anatin'ny roa taona ity mpihira 30 taona ity raha tsy misy ny fandidiana ao anatin'ny fotoana fohy. Koa satria lafo ny fandidiana any Mozambika sy ny fotoana mety hiandrasana ny fandidiana noho ny rafi-pitsaboana ao amin'ny firenena dia nasaina i Azagaia hanohy ny fitsaboana any India. Mandritra izany fotoana izany, mangataka fandraisana anjara avy amin'ireo mpankafy azy ilay mpanakanto satria tsy manana ny loharanom-bola handoavana izany fandidiana izany izy izay mitentina 25.000 dolara $:
Ny hahazoako vola amin'ity fandidiana ity any India no hany tadiaviko, fa mivavaka foana mba hisy ny fahagagana. Amin'ny foko manontolo, ny fanjavonan'ity fivontosana ity toy ny nipoirany ny fahagagana tiako ho hita, izany hoe, tsy mila azy ireo mandidy ny lohako aho.
Nahazo mpankafy noho ny fanoherany ireo mpitondra sy ny firesahany ny olana ara-tsosialy tamin'ny mozikany i Azagaia, izay midika hoe lefona. Nahasarika ny sain'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny tononkirany. Tamin'ny taona 2008, nampanatsoina izy hanaovana famotorana tao amin'ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana noho ny mozikany izay voalaza fa mandrisika herisetra.
Naneho hevitra ireo mpankafy tamin'ny fizarana ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook navoakan'ny mpitantana azy in-700 ny Alatsinainy 25 Aogositra 2014. Namela hafatra marobe ho an'ilay mpihira tao anaty andiam-panehoan-kevitra izy ireo. Betsaka, toa an'i Moises Jesus Alberto, no naneho ny fanohanany tsy misy fepetra an'ilay mpanao rap:
Manàna finoana ry rahalahy Azagaia fa miaraka aminao ny vahoaka, loharanon'aingam-panahy ho an'ny tanora maro ianao, anisan'izany aho
Nanoratra i Marcelo Massaite Jossias:
Miaraka aminao i Mozambika, mino aho fa maro no tsy mila mankany am-piangonana hivavaka ho anao, fa hangataka amin'Andriamanitra isa-minitra izy ireo hanampy anao raha vao henony ny toe-pahasalamanao. Miaraka aminao izahay rahalahy.
Nizara horonantsary fanohanana an'i Azagaia teo amin'ny rindriny i Edgar Kamikaze Barroso:
Aparitaho ny hafatra raha azonao atao. Misy ny antsipirian'ny kaontin'ny banky sy ny antsipirian'ny fifandraisana raha mila fanazavana fanampiny ianao any amin'ny faran'ny horonantsary.
Hafatra fanohanana maro an'isa mitovy amin'izany no hita tao amin'ny Twitter:
Tsy nahateny aho ary nalahelo tamin'izay niaraka tamin'ilay horonantsarin'i Azagaia
Vamos ajudar o Azagaia 🙂 Pouco ou muito vamos ajudar.
Andao hanampy an'i Azagaia. Kely na betsaka andao hanampy.
Firaisankina miaraka amin'i Azagaia, feon'ny tsy afa-miteny.
Efa nahazo mpankasitraka miisa 3.300 ny pejy Facebook iray antsoina hoe Ajuda O Mano Azagaia (Ampio Azagaia). Naangona 5.724 $ Amerikana ny fanentanana ara-bola hanaovana fandidiana an'i Azagaia (Azagaia Brain Tumor Operation Fund) satria tamin'ny andro voalohany fotsiny no efa nahazo ny 10 isanjaton'ny vola notadiavina izy ireo.